Offsite Modular ewu Blog
Ubara uru nke ulo oru ndi ozo di iche iche na ulo oru ulo
Mee ebe nkà dị ma ọ bụ ike kee
Kama ịmara ma ọ bụ na-ebugharị gburugburu ụlọ ndị dị mkpa ka a na-arụ ọrụ nke ọma n'ebe ndị mmadụ dị njikere ma dị njikere.
Ịchọta obere plots mba
A ghaghị ịkwado usoro iwu ụlọ dị iche iche nke na-eme ka ọbụna otu ụlọ na-akwụ ụgwọ ma na-akwụ ụgwọ dị mma, ọnọdụ nke ọtụtụ narị obere nhazi ebe dị n'etiti 1 ma kwuo ụlọ 30 nwere ike wuru bụ ngwọta. Nke a ga-eme ka usoro mmemme ahụ dị mfe ma mee ngwa ngwa na saịtị ọ bụla nwere ike ịmepụta ozugbo.
Usoro ulo oru oma
Anyị ga-etinye usoro usoro mmepụta nke Henry Ford iji wuo ụlọ nke ga-eweta mmepụta akụ na ụba, ngwa ngwa na oge dị mkpa ga-emeghe logjam. Ihe ndị a ga-eme ka ụlọ ọrụ ahụ daa ruo mgbe ebe obibi ga-aba ụba ọzọ.
Ihe ndi ozo eji eme ihe
Dika ekwuru n'ihu brik na slate nwere otutu ihe omuma, enwere otutu ugbua agwu ugbua taa nke n'eme ka ndi kachasi ihe di nma na oku na oyi.